NASSAT | Intanet site na Satellite Satellite. Ọrụ na Nkwado Nka
Ndozi Mmelite Mgbanwe nke Satellite
Internet Maritime - Nka na ụzụ - Telemedicine SMSSM Tv Fax Telemetry na VoIP Ekwentị
Anyị na-eji dochie njikọ Ịntanetị gị ugbu a maka nnukwu bandwit na ọnụego dị oke ọnụ. Nhọrọ nhọrọ VoIP.
NASSAT na-arụ ọrụ dị mkpa ná ndụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri. Mgbe a bịara n'ịnye nchedo ụgbọ mmiri na ọrụ nkwukọrịta, ọ dịghị netwọk ọzọ nwere ike iji aka ya ma ọ bụ n'ozuzu ọrụ anyị na-enye.
Melite njikọ Ịntanetị gị ugbu a na ọnụego dị oke ala n'enweghị eriri agbanwe. Ihe nlereanya na ika ọ bụla.
Ọrụ na Nkwado Nka na ọnọdụ n'ihi na ụdị ụdị antenna bụ Internet ma ọ bụ TV
Nyocha, Ịnye ọrụ, Nhazi na Ịmezi ụdị niile dị na ahịa
Satellite Internet na Flat Rate
TV, Ekwentị na Faksị
Nnyocha onyunyo - CCTV
NASSAT-enye ihe unrivaled nso nke olu, fax na data asatọ niile na ụdị na-tonnage arịa si obere yachts ka kasị oké osimiri-aga arịa, ikwe boaters na-ekwurịta okwu dị ka ihe n'ụzọ dị irè ma na osisi na mbenesụk
Ọtụtụ puku arịa na onye ahịa, ịkụ azụ, ntụrụndụ na ọchịchị ndi ịdabere na ọrụ ndị a maka emelite ọnọdụ akụkọ, telemedicine, ihu igwe na nchọgharị chaatị dị iche iche, na-ekwe ka ndị ọrụ na-akpọ ma ọ bụ na-ekwurịta okwu site na e-mail ndị enyi na ezinụlọ, ịghọ ihe dị oké mkpa iji nọgide na-enwe mmụọ mgbe ha nọ n'oké osimiri mgbe ụfọdụ ruo ọtụtụ ọnwa. Ọrụ ụgbọ mmiri aghọwo ọkọlọtọ maka ụgbọ elu dị elu, tinyere ihe karịrị njedebe 20,000 tinyere ọrụ.
Otú ọ dị, ọrụ kachasị mkpa nke Nassat bụ ndokwa nke ọrụ nche. Satellite ọrụ bụ ntọala nke Global Maritime Ahụhụ na Safety System (GMDSS), nke ejikọ kama ka akwọ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ banyere kacha nso nnapụta nchikota. Ọtụtụ ndụ a zọpụta ekele ọrụ ndị a, na ọtụtụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri rụrụ moorings kwa ụbọchị, mma na ihe ọmụma na-enyere dị mfe dị ka ịpị a button.
Nkwenye nke netwọk anyị dị mkpa iji nweta ikike a. Ná nkezi, nnweta nke netwọk anyị karịrị pasent 99.99. Nke a na-nọgidere ekwu site International Mobile Telecommunications Satellite Organization (IMSO) iji hụ na anyị izute chọrọ nke International Maritime maka GMDSS usoro maka Maritime ụlọ ọrụ Organization (Imo).
Na 2007, Nassat mma ya ndepụta nke mmiri ọrụ na mwepụta nke BASMAV, nke awade olu na brọdband data n'out oge - na gbapụrụ ọsọ nke na-akọrọ ohere 432 kbps kwa ọwa - gbakwunyere nhọrọ nke data udu-ekwe nkwa na - achọta 256 kbps. Ọrụ ahụ na-enyekwa ohere ndị dị elu dịka iji igwe GSM eme ihe na oké osimiri, site na iji teknụzụ picnic.
BASMAV bụ ọrụ ụgbọ mmiri na-arịwanye elu na-eto eto n'akụkọ ihe mere eme anyị, a na-ejikwa ya na ụfọdụ n'ime ụgbọ mmiri ndị ahịa kachasị n'ụwa. A na-enweta ọkpụkpụ n'ụwa nile ma e wezụga n'ihi ógbè dị oke pola.
Enyemaka ndị enyemaka na SeaTel, Intellian, KNS, KVH, King Sea, Cobham, Raymarine, Acutec, Glomex, AzTrax, Orbit.